China Chongqing Spicy Chicken mveliso kunye nabenzi | Huikang
I-Chongqing Inkukhu enongwe
Inkukhu ebabayo sisitya esidala saseSichuan. Ngokubanzi, yenziwe ngenkukhu iphela njengesona sithako siphambili, kunye ne-anyanisi, itshilisi eyomileyo, ipepile, ityuwa, ipepile, i-monosodium glutamate kunye nezinye izinto. Nangona sisitya esinye, senziwe kwiindawo ezahlukeneyo.
Inkukhu eqholiweyo ineempawu ezahlukeneyo ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zemveliso kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye ithandwa kakhulu ngabantu kuyo yonke indawo. Esi sidlo sinombala weoli obomvu obomvu oqaqambileyo kunye nencasa eyomeleleyo eqholiweyo.
Inokudliwa ngabantu bonke, kwaye ifaneleke ngakumbi kubantu abadala, abagulayo nabagulayo.
1. Abantu abanomkhuhlane kunye nefiva, imililo yangaphakathi ephezulu, ukufuma okunzima kunye nokufuma, ukutyeba kakhulu, abantu abanamathumba e-pyrogenic, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, lipids ephezulu yegazi, cholecystitis, kunye necholelithiasis akufuneki batye;
2. Inkukhu ayibalungelanga abantu abafudumeleyo kwindalo, banceda umlilo, i-yang esebenzayo, i-yang, ukhukuliseko lomlomo, amathumba esikhumba kunye nokuqunjelwa;
3. Izigulana ezine-arteriosclerosis, isifo sentliziyo kunye ne-hyperlipidemia kufuneka ziphephe ukusela isuphu yenkukhu; abo banengqele ehamba kunye nentloko, ukudinwa, kunye nomkhuhlane kufuneka bakuphephe ukutya isuphu yenkukhu nenkukhu.
Inkukhu inomxholo ophezulu weprotheni kunye nomxholo ophantsi weoli. Ukongeza, iprotein yenkukhu ityebile kuzo zonke ii-amino acid ezifanelekileyo, kwaye umxholo wayo ufana kakhulu neprofayili ye-amino acid kumaqanda nakubisi, ke ngumthombo weprotini ekumgangatho ophezulu. Zonke iigram ezili-100 zenkukhu engenalusu iqulethe iigrama ezingama-24 zeprotheyini kunye ne-0.7 yeegram zeepid. Kukutya okuneproteni ephezulu ngaphandle kwamafutha. Inkukhu ikwangumthombo olungileyo we-phosphorus, isinyithi, ubhedu kunye ne-zinc, kwaye ityebile ku-vitamin B12, ivithamin B6, ivithamin A, ivithamin D, ivithamin K, njlnjl. Inkukhu iqulethe ii-acid-oleic acid ezingafakwanga kakhulu (i-monounsaturated fatty acids) kunye ne-linoleic acid (i-polyunsaturated fatty acids), enokunciphisa i-lipoprotein cholesterol, enobungozi kwimpilo yabantu.
Umthamo wenkuku uphezulu kakhulu, kwaye uyangena lula kwaye usetyenziswe ngumzimba womntu, onomsebenzi wokuqinisa amandla omzimba kunye nokomeleza umzimba.
Okulandelayo: Ezimnandi kunye neeRib Rare Spare
Inyama yenkomo yefillet yaseSichuan kunye neHunan